मंगलवार, कार्तिक ४, २०७७ ०५:१३:४७ युनिकोड
अहिलेको डोल्पामा मेरो विद्यालयको क्षेत्र वरपर झन्डै १ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय वाहिर छन् जस्तो लाग्छ
शनिवार, भदौ २१, २०७६ यार्सान्यूज
सवभन्दा पहिले तपाईँ कर्णालीबाट उत्कृष्ट शिक्षकका रुपमा पुरस्कृत हुनुभएको छ । त्यसका लागि बधाई छ । तपाई डोल्पामा शिक्षण गर्नु हुन्छ । डोल्पाको वास्तविक शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
डोल्पाको शैक्षिक अवस्था पहिलेभन्दा सुधारोन्मुख छ । डोल्पाको भौगोलिक जटिलता अन्य जिल्लाभन्दा पृथक छ । अत्यधिक चिसो हुने, हिउँ पर्ने समस्या अपरडोल्पामा छ भने अर्कोतिर गरिवीको समस्या तथा अभिभावकमा चेतनास्तरको कारण शिक्षामा कम जोड दिने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति कमजोर हुँदै अभिभावक सचेत हुँदै गइरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरका निश्चित मापदण्डहरु छन्, त्यसबाट हेर्ने हो भने डोल्पा कमजोरै देखिन्छ । यद्यपी हाम्रो सापेक्षतामा डोल्पामा गुणस्तर वृद्धिका आफ्नै मौलिक गतिविधि गर्दै आइरहेका छौँ । यार्साको सिजनमा विद्यालयहरु ठप्प हुने गर्दथे । हाम्रो विद्यालयले यार्साको सिजनामा विद्यालय वन्द नगर्ने निर्णय तीन बर्ष अघिदेखि गरेपछि अरु विद्यालय पनि यस तर्फ गइरहेका छन् । हाम्रो विद्यालयको यार्साको मौसममा बन्द नगर्ने निर्णयले अभिभावकलाई पनि पैसाभन्दा पढाई ठूलो हो भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
नेपालभरि झन्डै ७ प्रतिशत वालवालिका विद्यालय उमेरमा पनि विद्यालय वाहिर छन् । डोल्पामा तपाईले पढाई रहनुभएको गाउँमा कति प्रतिशत बाहिर रहेका छन् ?
डोल्पा तीन कलस्टरमा छ । माथिल्लो डोल्पा, माझ डोल्पा र तल्लो डोल्पा । अहिलेको डोल्पामा मेरो विद्यालयको क्षेत्र वरपर झन्डै १ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय वाहिर छन् जस्तो लाग्छ । विद्यालयभन्दा वाहिर रहने वालवालिकाको संख्या अहिले न्यून हुँदै गइरहेको छ । बरु विद्यालय छोड्ने दर चाहीँ छ ।
यार्साका कारणले विद्यालय बन्द हुने, हिउँका कारणले विद्यालय वन्द हुने समस्याबाट डोल्पाका विद्यालयहरु प्रभावित छन् । यसको समस्या समाधान कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला ?
हिमाली जिल्लाहरु र अन्य जिल्लाको शैक्षिक सत्रको भिन्नताको आधार पनि सायद मौसमी प्रतिकूलता नै हो । डोल्पामा हाम्रो फागुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन्छ । डोल्पामा जेठको पहिलो हप्ताबाट नै यार्साको मौसम सुरु हुन्छ । यो मौसममा विद्यालयहरु बन्द गरेर सारा डोल्पावासी यार्सामा केन्द्रित हुने गर्दछन् । हाम्रो विद्यालयमा यो चलनलाई हटाइ नै सक्यौँ । यार्साका कारणले विद्यालय वन्द गर्ने चलनलाई हटाउन अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरु सवै चनाखो हुनुपर्ने हो ।
अर्कोतिर हिउँका कारण अत्यधिक जाडो हुने उपरडोल्पाका विभिन्न भूभागहरु हिउँदमा ठप्पप्राय हुन्छन् । ति विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई डोल्पाकै तातो हुने ठाउँतिर घुम्ती विद्यालय स्थापना गरेर ति वालवालिकाको शैक्षिक अधिकार सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
यदि उपर डोल्पाका वालवालिकालाई हामीले घुम्ती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँभने शैक्षिक सत्रमा जुन उपलब्धी हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यो हासिल गर्न सकिने अवस्था आउँदैन ।
विद्यालय स्थापना भएको ५०औं वर्ष भएको हुन्छ तर ५० वर्ष उमेर समूहका मानिस त्यही विद्यालय वरपर निरक्षर देख्न पाइन्छ । तपाईको डोल्पामा कस्तो अवस्था छ ?
हो, यो समस्या डोल्पामा पनि रहेको छ । पहिले पहिले विद्यालय स्थापना हुँदा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र अभिभावकको चेतनास्तरको समस्या, शिक्षाको महत्ववोधको अभावले त्यो हुन गएको हो । विद्यालयको उमेरभन्दा कम उमेर समूहका मानिसहरु पनि निरक्षर छन् । यो देशैभरिको समस्या होला ।
पहिलेभन्दा अहिले डोल्पामा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ । शिक्षित हुनु पर्दोरहेछ भन्ने चेतना अत्यन्त वृद्धि भएको छ । विद्यालय पठाउनु पर्छ भन्ने अभिभावकमा व्यापक जागरण भएको छ ।
डोल्पा कर्णालीको एक अभिन्न अंग हो । तपाईको शिक्षणको २५ वर्षको अनुभवबाट हेर्दा कर्णालीमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न के गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहनु भएको छ ?
राज्यले कर्णालीको वस्तुगत अवस्थाअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक सत्रको विविधता लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । शैक्षिक सत्रको अनमेल छ । शिक्षक, शिक्षा र विद्यार्थीको गुणस्तरका निम्ति भौतिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर छ । शिक्षकहरुलाई तालिमको समस्या छ ।
कर्णालीजस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा राज्यले शिक्षामा जोड दिएर गाउँ गाउँमा रहेका विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न विशेष नमूना कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यकता देखिन्छ । राज्यले कर्णालीलाई विशेष ध्यान दिए पछि मात्र कर्णालीको शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, भदौ २१, २०७६, १०:२७:००